Nehemiya 5 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Nehemiya anomisa kubiridzira (1-13)
Nehemiya haana kuremedza vanhu (14-19)
5 Zvisinei, varume nemadzimai avo vakachema chaizvo vachinyunyutira hama dzavo dzechiJudha.+ 2 Vamwe vaiti: “Isu nevanakomana vedu nevanasikana vedu takawanda. Tinofanira kuwana zviyo* kuti tidye tirarame.” 3 Vamwewo vaiti: “Tiri kupa minda yedu yembesa neminda yedu yemizambiringa nedzimba dzedu kuti zvimbobatwa kuti tiwane zviyo munguva ino yenzara.” 4 Paivawo nevamwe vaiti: “Takakwereta mari tichiita zvekubatisa minda yedu yembesa neminda yedu yemizambiringa kuti tibhadhare mutero kuna mambo.+ 5 Tiri nyama imwe neropa rimwe nehama dzedu,* vana vavo nevana vedu vamwe chete asi tava kufanira kuisa vanakomana vedu nevanasikana vedu muuranda, uye vamwe vanasikana vedu vatova varanda.+ Asi hatina simba rekumisa zvinhu izvi, nekuti minda yedu yembesa neminda yedu yemizambiringa yava yevamwe.” 6 Pandakangonzwa kuchema kwavo nemashoko aya ndakatsamwa chaizvo. 7 Saka ndakafunga zvinhu izvi mumwoyo mangu, ndikapikisana nevakuru vakuru nevatevedzeri vevatongi, ndikati kwavari: “Mumwe nemumwe wenyu ari kubhadharisa hama yake chimbadzo.”+ Ndakarongawo kuti pave negungano guru nemhaka yezvavaiita. 8 Uye ndakati kwavari: “Takaita zvese zvataigona tikadzikinura hama dzedu dzechiJudha dzakanga dzatengeswa kune mamwe marudzi; asi iye zvino mungatengesa hama dzenyu+ here, uye dzinofanira kutengeswa zvakare kwatiri here?” Vakanyarara, vakashaya zvekutaura. 9 Ndakabva ndati: “Zvamuri kuita hazvina kunaka. Hamufaniri here kufamba muchitya Mwari wedu+ kuti marudzi, ivo vavengi vedu, varege kutishora? 10 Iniwo nehama dzangu nevashandi vangu, tiri kuvakweretesa mari nezviyo. Ndapota ngatiregei kukweretesa uku kwatiri kuita tichiwana mubereko.+ 11 Ndapota, vadzorerei nhasi chaiye minda yavo yembesa,+ yemizambiringa, neyemiorivhi, nedzimba dzavo, nechikamu chimwe chete muzana* chemari, chezviyo, chewaini itsva, nechemafuta, chamuri kutora kwavari semubereko.” 12 Ivo vakabva vati: “Tichavadzorera zvinhu izvi tisingavabhadharisi. Tichaita zvamataura chaizvo.” Saka ndakashevedza vapristi ndikaita kuti varume ivavo vapike kuti vachazadzisa vimbiso iyi. 13 Uyewo, ndakazunza homwe yepachipfuva yenguo yangu,* ndikati: “Sezvandaita izvi, munhu wese asingazadzisi vimbiso iyi ngaazunzwe abviswe mumba make uye papfuma yake naMwari wechokwadi; ngaazunzwe saizvozvi, asare asina chinhu.” Ungano yese yakabva yati: “Ameni!”* Vakarumbidza Jehovha, uye vanhu vakaita zvavakavimbisa. 14 Uyewo, kubva pazuva raakandiita gavhuna wavo+ munyika yeJudha, kubva mugore rechi20+ kusvika mugore rechi32+ raMambo Atashasta,+ makore 12, ini nehama dzangu hatina kudya zvekudya zvaifanira kupiwa gavhuna.+ 15 Asi magavhuna akanga anditangira akanga aremedza vanhu uye aitora kwavari mashekeri* 40 esirivha echingwa newaini zuva nezuva. Uyewo, vashandi vavo vaidzvinyirira vanhu. Asi ini handina kuita izvozvo+ nekuti ndaitya Mwari.+ 16 Ndakashandawo pabasa rerusvingo urwu, uye hatina kana munda mumwe chete watakatsvaga;+ uye vashandi vangu vese vakanga vakaungana ipapo kuti vaite basa racho. 17 Paiva nevaJudha nevatevedzeri vevatongi vaidya patafura yangu vari 150, pamwe chete nevaya vakauya kwatiri vachibva kune mamwe marudzi. 18 Zuva rega rega ndaigadzirirwa mombe imwe chete, makwai 6 akanaka, neshiri, zvichitorwa papfuma yangu uye kamwe chete pamazuva gumi ega ega taiwana waini yakawanda yakasiyana-siyana. Pasinei nezvese izvi, handina kurayira kuti ndipiwe zvekudya zvaifanira kupiwa gavhuna, nekuti vanhu vaitoremerwa nebasa ravo nechekare. 19 Mwari wangu, ndiyeukeiwo mundikomborere* nekuda kwezvese zvandakaitira vanhu ava.+
^ ChiHeb., “nyama yedu yakafanana nenyama yehama dzedu.”
^ Kureva, chimbadzo chaibhadhariswa pamwedzi.
^ ChiHeb., “ndakazunza chipfuva changu.”
^ Kana kuti “muchindifarira.”